Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Heshiiska Guusha Xambaarsan Ee Ururka ONLF Kula galay Itoobiya Wadanka Eriteriya- By: Xaaji M/rashiid.
Maqaal: Heshiiska Guusha Xambaarsan Ee Ururka ONLF Kula galay Itoobiya Wadanka Eriteriya- By: Xaaji M/rashiid.
Posted by Wariye Qaran	/ October 23, 2018
Hambalyo, Heshiiska Guusha Xambaarsan Ee Ururka ONLF Kula galay Itoobiya Maagalada Casmara, Eriteriya- By: Xaaji M/rashiid
Hor iyo horaamba waxaa guul ah inuu halganka gobanimodoonka ah ee Ururka ONLF hogaaminayo uu 34 jirsaday isla markaana uu 24 sano oo xidhiidh ah dagaal hubaysan kujiray. Markaan intaa kasoo gudbo waxaan si mugle u daalacday Qodobada heshiiska dhexmaray ONLF iyo Itoobiya 21 Oct 2018 ee Asmara, wuxuuna ahaa Guul taariikh ah oo Ururku usoo hooyay Umada soomaalida Ogadenya.
Waxaan bulshada halgamaaga ah ku baraarujinayaa wax ay ogyihiin oo ah inuu ilaahay SWT Cirka & Dhulka kudhisay Lix cisho, isagoo awooday inuu hal maalin kudhiso. Waxay culimadu yidhaahaan waxaa looga jeedaa in Bani’aadamka labaro tartiibta oo markay wax sameynayaan ayna kusoo booday kadhigin.
Waxaan Hambalyo & Bogaadin meeqaan sare leh halkan uga tabinayaa Gudidii wadahadalka u mataleysay Gobanimodoonka ONLF. Dhab ahaantii waxaan u arkaa inay galeen dagaal siyaasi ah oo ilaahay uuni xaalkiisa ogyahay, waxaana cadeynaya qodobada kasoo baxay oo aad uqiimo badan. Qodobadu way koobanyihiin, laakiin mid walba gaarkiisa waxaa kudhex aasan waxbadan oo wanaag ah.Waxaa intaa dheer inay hawsho wali sii socoto ee dadkaygoow ilaahay ku mahadiya wanaaga.
Wuxuu Rabi SWT Qur’aankiisa kusheegay in cidii ku shukrida kheyrka uu bixiyo loo siyaadin doon, balankana Rabi kama baxee ogaada! Waxaan Mar labaad leeyahay wafdiga Alfa-Mabruuk, dadaalka qaaliga ah ee aad gasheen maalmihii adkaa ee lasoo dhaafay. Ajir iyo xasanaad waafi ah ilaahay ha idin siiyo midhahana gacantiina hasoo galiyo- Aamiin.
Guusha Xaq Udirirkaa Leh Idanka Ilaahay.